Ganacsiga Ay Soomaalidu Ku Leedahay Koofur Africa Oo Xiran – Goobjoog News
Qaar ka mid ah ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin magaalada Perotoria ee caasimadda waddanka Koofur Africa ayaa xiran ka dib markii ay halkaas ka dhaceen weeraro .
Mid ka mid ah ganacstada ku nool waddanka Koonfur Africa oo la hadlay Goobjoog News ayaa waxa uu sheegay in ganacsiga ka jira magaalada Perotooriya uu xiranyhay waxa uu intaas uu ku daray in dadka Soomaalida ah ay ka qaxeen magaalada.
“Soomaalida xaafadda Peritooriya dageneed ee caasimadda dalka haweenka iyo caruurta shalay ayay qaxeen, goobo ganacsi oo furan malahan, isku socodka dadka iyo gaadiidaka wax socda malahan” sidaa waxaa Goobjoog News u sheegay weriye Maxamed Yusuf Kulane oo ku sugan caasimadda koofur Afrika.
Xaaladda ku haysata dadka Soomaaliyeed waddanka Koofur Africa ayaa waxay tahay mid cakiran, waxaana dhibaatooyin faro badan loogu geystaa waddankaas muwaadiniinta Soomaaliyeeed eek u nool, iyadoo oo ay u sii dheertahay in la dhaco hantidooda.
Marar badan ayaa waxaa lagu dhibaateeyay Koofur Africa ganacsato Soomaaliyeed iyagoo la gubay goobahoodii ganacsi kuwa kalena la dhacay .
Dowladda Ingiriiska oo Heshiisyo Dhanka Shaaha iyo Ubaxa ah La Galeysa Dalka Kenya